Fetin’ny Paka: olona roa maty, 125 ireo narary nentina Hopitaly | NewsMada
Nihena ny isan’ny maty sy naratra nentina teny amin’ny HJRA raha mitaha ny isan-taona.
Olona roa no maty, raha 125 ireo narary nentina teny amin’ny HJRA, hatry ny omaly hariva, tamin’ny fankalazana ny fetin’ny Paka.
Araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra teny an-toerana, vitsy ireo narary na matin’ny toaka nentina teny amin’ny HJRA. Nitombo kosa, ireo vehivavy namono tena, nampidirina tao amin’ny sampana famelomana aina HJRA ihany.
Ny mombamomba ireo olona maty kosa, voalaza fa ny iray main’ny herinaratra ka nitarika ny fahafatesany, ary nentina amin’ny tranompatin’ny HJRA.
Araka ny fanazavana, nihanika tamboho saika hangalatra kisoa amam-borona tao amina tokantrano iray teny Itaosy izy io. Nasian’ny tompon-trano herinaratra ny fefy manodidina, ka teo no naha voafandrika azy. Naterin’ny zandary ao amin’ny HJRA ny razana. Olona iray hafa ihany koa maty, saingy tsy fantatra mazava ny nahafaty azy, fa naterin’ny olona ny razana.
Enina namono tena
Enina namono tena Raha ho an’ny andron’ny paka sy ny alatsinain’ny paka, 23 ny isan’ireo narary tonga tao amin’ny sampana famelonan’aina. Enina ny isan’ny olona namono tena, saingy tsy maty tao anatin’io roa andro io. Vehivavy ny efatra tamin’ireo olona nisotro poizina ireo. Tsy fahazakana fiainana sy resa-pitiavana no fantatra fa antony nisotroan’izy ireo fanafody mampatory sy famonoana biby toy ny « nuvan ».
Nahatratra 125 ny isan’ireo olona narary tonga teny amin’ny Sampana vonjy ain’ny HJRA, nandritra ny andron’ny Paka sy ny alatsinainin’ny paka. 82 ny isan’ireo narary tonga ny alahady, raha toa ka 43 ny alatsinainy ny Paka. Taorian’ny fizahana nataon’ny mpitsabo, 25 tamin’ireo narary ireo no voatery naiditra hopitaly. Ny ambiny nalefa nody rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy.
Ireo naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana no maro, raha toa ka vokatry ny adiady madinidinika ny sasany. Anisan’ny maro ny olona nentina hopitaly vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany Soamahamanina. Ampolony ireo naratra ka voatery nentina hopitaly.